WAR DEG DEG:Qarax labaad oo ka dhacay Banaanka Hotel Dayax (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
WAR DEG DEG:Qarax labaad oo ka dhacay Banaanka Hotel Dayax (Daawo Sawirada)
Qarax labaad ayaa ka dhacay Banaanka Hotel Dayax ee Magaalada Muqdisho, kadib markii gaari laga shakisanaa oo yaalay Banaanka Hotel Dayax uu halkaasi ku qarxay.
Wararka ayaa sheegaya ciidamada dowladda oo ka feejigan gaarigaasi, iskana ilaalinaya uu mar kaliya qarxay gaariga.
Qaraxa labaad ee dhacay ayaanan la dhawaq aheyn kii markii hore dhacay, maadaama gaariga koowaad uu kaxeynaayay qof naftiis halige ah oo Hotelka ku dhuftay gaariga.
Ilaa hada lama oga inta uu la eeg yahay Khasaaraha ka dhashay qaraxyadaan ka dhacay Magaalada Muqdisho ee lagu weeraray Hotelka Dayax.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya dabley hubaysan inay gudaha u galeen Hotelka.
Wakaalada Wararka Somaliyed ee SONNA, ayaa sheegtay rag hubaysan oo gaaraya 5 ruux inay gudaha u galeen Hotelka.
Ciidamada Nabad Suggida ayaa ku sugan Hotelka Dayax, waxaana la maqlayaa dhawaqa rasaas dhaceysa.
Hotel Dayax oo ah Hotel dhismihiisa uu yahay dhowr dabaq, ayaa inta badan waxaa degan Xildhibaano ka soo jeeda deeganada Maamulka Koonfur Galbeed iyo Wasiirada ka tirsan Maamulkaasi.
Dhismo ku yaal Isgoyska Dabka oo gubanaya
War Deg Deg Ah: Weerar Ismiidaamin ah oo lagu qaaday Hotel Dayah iyo Rasaas xoogan oo socota